APK ကို Android အတွက် Download PowerGrasp ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » PowerGrasp ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို
PowerGrasp ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager က APK ကို
ZIP ဖိုင်, RAR, 7z နှင့်ကတ္တရာစေးထောက်ခံမှုနှင့်အတူတစ်ဦးကချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့်အဆင်ပြေ archives နဲ့ဖိုင်မန်နေဂျာ။
- ကိုဖြည် ZIP ဖိုင်, RAR, 7z, ကတ္တရာစေးများနှင့်လည်း tar.gz
- Creating နှင့်တည်းဖြတ် ZIP ဖိုင်, 7z, ကတ္တရာစေးနှင့် tar.gz
- ဒါကြောင့်အပေါ်ဖိုင်မှတ်တမ်းမိတ္တူများကဲ့သို့ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူမန်နေဂျာငါးပိ, delete, ဝေစုများနှင့်
- Nice ပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူကြည့်ရှု
ခွင့်ပြုချက်အကြောင်း: အိပ်ထဲကနေကာကွယ်တားဆီးရေး (အချို့လူများကအကြောင်းကိုဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်) ဖိုင်များနှင့်အတူတစ်ခုခုလုပ်နေစဉ်နိုး device ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
သင်တစ်ဦး bug ကိုတွေ့ရှိရသို့မဟုတ်တစ် feature ကိုတောငျးဆိုခကျြကိုလုပ်ချင်တော့ပါလျှင်, ထိုကြီးမြတ်ပဲ! သည် "ရေးသားသူ" အပိုင်းအတွက်ကိုအောက်တွင်ပေးထားသောဆိုက်ကူးခေါင်းနှင့်ရှိပြီးသားပြဿနာတစ်ခုမှတ်ချက် add သို့မဟုတ်အသစ်တဦးတည်းဖွင့်လှစ်။ သငျသညျငါ့ကိုလည်းအီးမေးလ်တစ်စောင် drop နိုင်ပါတယ်။
သင်က (ဖေါဒါမှမဟုတ်တချို့မထောက်ပံ့ algorithm နှင့်အတူမပါ) သင့်ပါတယ်သော်လည်းငါ့အပလီကေးရှင်းထဲမှာဖွင့်လှစ်မထားဘူးသောသူအချို့မကောင်းတဲ့ archive ကိုသတင်းပို့ပါလျှင်, သင့်ပြဿနာသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကပူးတွဲဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် guesswork သင်သိတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ archive ကိုလည်းကြီးမားသည်ဆိုလျှင်, ဖိုင်တစ်ဖိုင်လဲလှယ်ဝန်ဆောင်မှုက upload တင်နှင့် URL ကိုစွန့်ခွာ။
Oh, နှင့်ငါ၏အပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား! သင်ကမကြိုက်ဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်။
7Zip & ဇစ် - Zip ...
Emenuwe မိုက်ကယ် says:
ဇူလိုင်လ 14, 2015 မှာ 12: 08 နံနက်
ငါဒီ app abuot ကပြောသည်ဘာကိုချစ်။ ငါဖော်ပြထားကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။